Nyi Mu Yar: June 2009
ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ
စင်ကာပူက အွန်လိုင်း ခရီးသွားလမ်းညွှန် ဆိုက်တခု
မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ် စစ်တွေလေဆိပ်၌ ဆင်းသက်စဉ် ပ...
ပီစီ ရှိုး ၂၀၀၉ - PC Show 2009
ဒေတာဘေစ့် တခုကို ဘက်ကပ် လုပ်ခြင်း (SqlSvr 2005)
at Friday, June 26, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar4comments
ကွန်ပျူတာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဂတ်ဂျက်စ် တွေကို ဝါသနာပါတဲ့ အလျှောက် ရောက်တဲ့ ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကို အမြဲပဲ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို ဒီစီဒီ က ဈေးနှုန်းတွေကို တပါတ်တခါ သွားသွားတောင်းလေ ့ရှိတယ်။
နောက်ပိုင်း ဈေးနှုန်းတွေက ခေတ်နဲ့ အညီ အင်တာနက်ပေါ် ကြည့်လို ့ရလာတော့ အဲ့ဒီ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို နေ ့တိုင်းလောက် နီးပါးကြည့်ပြီး ဘယ်ပစ္စည်း ဘယ်ဈေးလည်း၊ မကြာမီ ဝယ်မယ့် ဈေး ဘယ်လောက်လည်း၊ ဘယ်ဈေး ဘယ်လောက်ကျသွားလို့ဝယ်ရင်ကောင်းမလား ဆိုပြီး အမြဲ သွားရောက်အားပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
တခါတခါ တော့လည်း သွားမကြည့်မိလို့လွတ်သွားတာတွေ၊ ကြည့်နေရင်းက မေ့ကျန်သွားတာတွေ ရှိလာတော့ စုစည်းမိအောင် ဘလော့မှာ တင်ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ် ဆိုပြီး စုစည်းလိုက်တာပါ။
ခု စလုံးမှာကတော့ ဖူနန် ကို တပါတ်တခါ၊ ဆင်းလင်း ကို နှစ်ပါတ်တခါ လောက်ရောက် ဖြစ်တယ်။ အရင် ယိုးဒယားမှာတုန်းက ဒီတပါတ် ပန်တစ် ကိုသွားရင်၊ နောက်တပါတ် အိုင်တီစကွဲ၊ နောက်တပါတ် ဇီယာ-ရန်ဆစ် အဲသလိုကို လျှောက်သွားတာပါ။
အိုင်တီ စကွဲက ဒွန်မောင်း လေဆိပ်ဟောင်းနား ကျက်ဝါ့တနာ့ လမ်းမကြီးဒေါင့်မှာ သူက ဖူနန် နဲ့ ဆင်တယ်။ ဇီယာ နဲ့ ပန်တစ် ကတော့ ဆင်းလင်း ကျနေတာပဲ။ ဇီယာ ကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကြီးလွန်းပါတယ်၊ ဝေးလည်း ဝေးလွန်းတယ် ဒရင်းဝေါလ် နားတောင် ရောက်တော့မယ်။
++ SINGAPORE ++
SimLim Square Shop Lists
HWZ Price Guide
VR Zone Price Guide
Active Foto & Electronics
Ace Technology Computers
Agenuine Technology (another)
Bell Systems Electronics Pte
Bizgram Pte Ltd
Bliss Computer Trading Pte
Bliss Computer Trading Pte Ltd
Cashtronic Computer Technology
Laser Distributor Pte
Media Mart Computer
myneXT com Pte Ltd
PC Themes Technology Pte Ltd
Personal Automation Mart (P.A. Mart) Pte Ltd
Sigma Computer Trading Pte Ltd
Storage Studio Singapore Pte Ltd
Tradepac Distribution Pte Ltd
VIST Computers Pte Ltd
Fujitsu Concept Store (SG)
Juzz1 @ Sim Lim
Microware Systems (S) Pte Ltd
Prolink - Data Systems Pte Ltd
SG HARVEY NORMAN
Hardware House International
Australia Computer Online Pty Ltd
Beecom Technologies Pty Ltd
EYO Technologies Pty Ltd
IT Computer Supermarket
Newcomputers Pty Ltd
Panda Computer Australia
UMart International Pty Ltd
AU HARVEY NORMAN
(PC Compo):PC Components Pricelists
(NoteBk): Notebook Pricelists
(PC Sys):PC System Pricelists
(Ele): Electronics Pricelists
(Mob): Mobile Phones Pricelists
(Gad): Gadgets Pricelists
at Sunday, June 21, 2009 Labels: General , MM , Singapore Posted by nyimuyar4comments
ဒီကနေ့မထင်မှတ်ဘဲ ဆိုက်တခုကို သွားတွေ့တယ်၊ စင်ကာပူမှာ လမ်းရှာ နေရာရှာ တဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က မြေပုံလမ်းညွန် ဆိုက် တွေထဲမှာ နောက်ပေါက် ဆိုက်တခုပေါ့။ gothere.sg တဲ့။
အသွင်အပြင်နဲ့ သုံးရလွယ်ကူတဲ့ ဆိုက်တခုလို ့တော့ မြင်ရပါတယ်။
သွားချင်တဲ့ နေရာ ၂ ခုကို ရိုက်ပေးလိုက်တာနဲ့ တခါတည်း လမ်းညွန်ပေးတော့တာပါပဲ။
ပြီးရင် လမ်းညွန် စာမျက်နှာမှာ မြေပုံ ပေါ်လာပြီး ခရီးစဉ် စမယ့် နေရာ (အေ) နဲ့ ဆုံးမယ် ့နေရာ (ဘီ) ကို တခါတည်း အပြာရောင် လိုင်းနဲ့ ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်ရမယ် ဆိုလည်း အကွာအဝေး ဘယ်လောက် ဘယ်နှစ်မိနစ် လျှောက် ရမယ် ကားစီး ရမယ်ဆိုလည်း ဘယ်နံပါတ် ကို ဘယ်နှစ်မှတ်တိုင် စီးရမယ် ခရီးစားရိတ် ဘယ်လောက် ကျမယ် ကြာချိန်ကိုလည်း တွက်ပြီး ဖော်ပြပေးပါတယ်။ လမ်းလျှောက် ရတဲ့ ကြာချိန်ကလည်း ကွက်တိပဲ၊ လျှောက်နေကျ လမ်းတွေကို ရိုက်ထည့်ကြည့်တာ အချိန်က အတိအကျပါပဲ။
စလုံးမှာ ၁၈ ရက်နေ ့ကမှ တရားဝင် အဆင့်မြင့်ခွင့် ရသွားတဲ့ ပန်းသီး ရဲ့အိုင်ဖုန်း ၃.၀ အိုအက်စ် အသစ် မှာတောင် သုံးလို ့ရအောင် လုပ်ပေးထားသတဲ့၊ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်တော့ လိုတာပေါ့လေ။
သုံးကြည့်သလောက်တော့ လွယ်ကူပြီး သဘောကျ နေပါတယ်။ သုံးနေကျ streetdirectory.com ထက် အချို ့နေရာတွေမှာ ပိုလို ့တောင် အဆင်ပြေ ချောမွေ ့နေပါသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို လမ်းညွန်ပေးတဲ့ ဝက်ဆိုက် တခုတိုးလာတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေတာပေါ့။ အခုဆိုရင် စာရေးသူ သုံးနေကျ streetdirectory.com အပြင် gothere.sg ကိုလည်း အဓိကထား သုံးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမို့စာဖတ်သူတွေ လည်း ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမပြေ စမ်းသပ် သုံးနိုင်အောင် လမ်းညွန်လိုက်ရပါတယ်။
စာရေးသူ သုံးနေကျ စင်ကာပူ မှ အွန်လိုင်း ခရီးသွား လမ်းညွန် ဆိုက်များ
ဘက်စ်ကား ခရီးစဉ်နဲ့ မှတ်တိုင် ရှာပေးတဲ့ Transit Link
မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ် စစ်တွေလေဆိပ်၌ ဆင်းသက်စဉ် ပြေးလမ်းချော်ကာ ပျက်စီး
at Friday, June 12, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar2comments
ယခုလ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက် စနေနေ့နံနက်ပိုင်း မြန်မာ့လေကြောင်း (Myanmar Airways) မှ ပြည်တွင်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စင်း စစ်တွေလေဆိပ်မှာ ဆင်းသက်စဉ် ပြေးလမ်းချော်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူ တောင်မှ ဒီကနေ ့မှ သိခဲ့ရတာပါ။ ပြည်တွင်း သတင်းစာများဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အလင်းနဲ့ ကြေးမုံ သတင်းစာတွေမှာ နောက်တနေ့ဇွန်လ ၇ ရက်နေ နေ့စွဲနဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပျက်စီးခဲ့တဲ့ လေယာဉ် ရဲ ့မူလ အနေအထား
သတင်းစာတွေမှာတော့ တွဲဖက်လေယာဉ်မှုးတဦးသာ နဖူးတွင် ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို ့ဖော်ပြခဲ့ပြီး အခြား သတင်းတွေမှာတော့ အနည်းဆုံး ၃ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ လေယာဉ်ကတော့ အတော့ကို ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ဘီး တွေနဲ့ ညာဖက်အတောင်ပံ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးခဲ့ပြီး လေယာဉ်ရဲ့ ဘယ်ဖက် ဦးခေါင်းပိုင်း အနည်းငယ် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ခရီးသည်တဦးကတော့ အရေးပေါ်တံခါးပေါက်တွေ အတန်ကြာမှဖွင့်တာတွေ ခရီးသည်တွေ အလွန်ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခဲ့တယ်၊ အောက်စီဂျင်နည်းလို့လေယာဉ်ထဲမှာ မွန်းကြပ်နေခဲ့တယ်လို့ဖုန်းနဲ့ ပြောခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီ သတင်းတရပ်မှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
ရုတ်တရက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လား၊ ကန့်လန့်ဖြတ်တိုက်တတ်တဲ့ လေပြင်းတွေကြောင့်လား၊ စက်ကိရိယာ ချို ့ယွင်းမှုကြောင့်လား၊ လေယာဉ်မှူး အမှားကြောင့်လား၊ လေကြောင်းပြ အမှားကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပြီး လူ့အမှားကြောင့်ဆိုရင် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမယ်လို့သိရပါတယ်။
အခု လမ်းချော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ ဖော်ကာ အက်ဖ် ၂၈ (Fokker F28 Fellowship 4000) မှတ်ပုံတင် နံပါတ် XY-ADW လေယာဉ်ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ် သုံးလပိုင်း ၁၄ ရက်နေ ့က ပထမဆုံး ပျံသန်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ဘီအေစီ ဗမာလေကြောင်း ကော်ပိုရေးရှင်း ကို လွဲပြောင်း ပျံသန်းပြေးဆွဲခဲ့တာကြောင့် ပျံသန်းသက် ၃၂ နှစ်နဲ့ လေးလ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသေအပျောက် မရှိဘဲ အန္တရာယ်ကင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့အတိုင်းထက် အလွန်ဝမ်းသာရပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အန္တရာယ်သိပ်ကြီးပါတယ်။ လေကြောင်း နဲ့ ခရီးသွားလာနေသူတွေ အကုန်လုံး အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပြီး လိုရာခရီးကို အောင်မြင်စွာ သွားလာနိုင်ကြပါစေလို့.....
ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီး စစ်တွေလေဆိပ်၌ ပြေးလမ်းချော်
တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦး အနည်းငယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသည်မှ အပ ခရီးသည်များနှင့် ကျန်လေယာဉ် အမှုထမ်းများအားလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိ
ယနေ ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မှစစ်တွေသို့ထွက်ခွာလာသော မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးသည်တင် လေယာဉ် တစ်စင်းသည် စစ်တွေ လေဆိပ်၌ ပြေးလမ်းချော်ပြီး ပြေးလမ်း၏ ညာဘက်သို့ထိုးကျသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်မှာ ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၁၀မိနစ်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မှစစ်တွေသို့ပျံသန်းလာသည့် မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်အမှတ် F-၂၈ XY-ADW ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး နံနက် ၈နာရီ မိနစ် ၂၀ခန့်တွင် စစ်တွေလေဆိပ်သို့ဆင်းသက်စဉ် လေယာဉ်ပြေးလမ်းချော်ပြီး ပြေးလမ်း၏ ညာဘက်သို့ထိုးကျကာ လေယာဉ်ပြေးလမ်း ပေ ၂၀၀ ခန့်အရောက်တွင် လေယာဉ်သည် ညာဘက်သို ့ကွေ့သွားပြီး လေယာဉ်ကွင်း ခြံစည်းရိုးနှင့် တိုက်၍ရပ်တန့်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်ပေါ်၌ လေယာဉ်အမှုထမ်း ခြောက်ဦး၊ ခရိးသည် ၆၂ဦး စုစုပေါင်း ၆၈ဦး ပါရှိပြီး တွဲဖက်လေယာဉ်မှုး ဦးစိုးရီ တစ်ဦးတည်းသာ နဖူးတွင် အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ လေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံများကို bizfreak collection၊ မြန်မာအလင်း သတင်းစဉ်၊ ဧရာ၀တီ နဲ့ မဇ္ဈိမ အင်တာနက် စာမျက်နှာများက ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
all credit goes to: New Light of Myanmar, mizzima, irrawaddy and bizfreak collection.
at Thursday, June 11, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar0comments
စောင့်စားမျှော်လင့် နေသူတို ့အတွက် ပါဆင်နယ် ကွန်ပျူတာ ပြပွဲ (ပီစီရှိုး) ၂၀၀၉ ကို ဒီကနေ့နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
နှစ်စဉ် သုံးလ တကြိမ် အီလက်ထရွှန်းနစ် ပြပွဲ လုပ်တဲ့ စင်ကာပူမှာ ယခု ပြပွဲက ၂၀၀၉ အတွက် ဒုတိယမြောက် ပြပွဲဖြစ်ပြီး ဒီကနေ ့၁၁ ရက်နေ ့ကနေ ၁၄ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့အထိ ဆန်းတက် စီးတီး ၁၊၃၊၄ နဲ့ ၆ ထပ် များမှာ နေ ့စဉ် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ကနေ ည ၉ နာရီအထိ ဝင်ကြေးအခမဲ့ ခင်းကျင်းပြသ ရောင်းချသွားမှာပါ။
ပါဝင်ပြသ ရောင်းချသူပေါင်း ၆၀၀ ကျော်တို ့က ပြသရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး လေ့လာကြည့်ရှုသူ ၁ သန်းခန် ့လာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်မှနး်ထားကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း နဲ့ ဝက်တုပ်ကွေး တို့ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ရောင်းအားကျဆင်းမှု သိပ်ပြီး သိသာစွာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူ အချို ့က ဟောကိန်း ထုတ်ထားပါတယ်။
ဝက်တုပ်ကွေး အရှိန် ရှိနေသေးတာကြောင့် ပီစီရှိုး ကို သွားမယ်ဆိုရင် ခလေးငယ်တွေကို မခေါ်သွားဖို့ အကြံပေးထားကြပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အင်တာနက်ကနေ ဈေးအရင်ကြည့်ထားဖို့လည်း အကြံပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပို ့စ်မှာလည်း အင်တာနက်ကနေ ပြပွဲမှာ ဝေတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင် နဲ့ ဈေးတွေ ကြည့်လို့ရမယ့် နေရာတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ထူးခြားမှုတခုက ဒီလင့်အိုင်ပီ ကင်မရာကနေ တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူး နေတဲ့ ရုပ်ငြိမ် ဓာတ်ပုံများကို ၁၅ စက္ကန် ့တကြိမ် ထုတ်လွင့်ပေးနေတာကို စီနက်အေးရှားရဲ့အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ မြင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စုစည်းပေးထားတဲ့ ပြပွဲ လက်ကမ်းနှင့် ဈေးနှုန်း လင့်ခ်များ (Most Updated)
live at PC Show 2009 by cNet asia
CNet Asia PC Show 2009
Hardwarezone PC Show 2009
Hardwarezone PC Show 2009 Preview
Bootstrike PC Show 2009 Price Lists and Brochures Listing
HWZ Picasa Link Brochures
drop io Link
Vr-Zone Promotion Link
ဈေးနှုန်းများကို ကြိုတင်ကြည့်ရှူ သွားရည်ကျရင်း လိုချင်တပ်မက်မှုများ ငမ်းငမ်းတက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဖြင့်
at Wednesday, June 10, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar 1 comments
ဒီနေ ့မနက် ဘုရား ကပ်ထားတဲ့ သစ်သီးများ
အိန္ဒိယ က မချစ်စု သရက်သီး
တကယ့်ကို မချစ်စုပါပဲ ဝင်းမှည့်လေးပေါ့ မွှေးနေတာပဲဗျာ။ ရင်ကွဲ သရက်သီး ကို ဒီနှစ်တော့ မတွေ ့သေးဘူး။
အမေရိကန်က ဆိုတဲ့ ပန်းသီး အရောင်ကတော့ လှလိုက်တာ
wiki: June 10
at Friday, June 05, 2009 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar4comments
Microsoft SQL Server 2005 Database ဒေတာဘေစ့် တခုကို (Backup) ဘက်ကပ် လုပ်ပြီး သိမ်းတာ မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျွမ်းတဝင် မရှိ၊ မသိခဲ့ရင်တော့ တော်တော်လေးကို ရှာရမှာပါ။ ၂၀၀၆နှောင်းပိုင်း ဘန်ကောက်ရုံးမှာ ပထမဆုံး (backup) ဘက်ကပ် လုပ်ခဲ့စဉ်က အတော်ပဲ ရွာလည်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းဝင်တဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာကိုး။
နောင်တော့လည်း မကြာခဏ လုပ်ပေးရတော့ ထမင်းစား ရေသောက်သလို လွယ်ကူသွားပါတယ်။ အဲဒီ ပထမဆုံးအခေါက်က ဆရာသမားဖြစ်သူက ဘက်ကပ် ဘက်ကပ် အမြန်လုပ်ထားလို့သတိပေးတော့ တောင်ရှာရ မြောက်ရှာရ နဲ့ တော်တော်ကြီးကို ကြာသွားပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲတွေ လုပ်လို ့ပေါ့။
နောက်မှ အလွယ်တကူ Wizard လေး သုံးပြီးလုပ်လို ့ရမှန်း သိတာပါ။ အဲ့သလိုပဲ ဒီတပါတ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်း တယောက် အဲသလို အဖြစ်မျိုး ခပ်ဆင်ဆင် ထပ်ကြုံတွေ ့ရတော့ သူ ့ကို ကူညီရင်း ပရင့်စကရင်တွေ ဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ တချိန်ချိန် အသုံးလို်မယ်ထင်လို့ညီဖြစ်သူကိုလည်း ဒီ (Print Screen) ပရင့် စကရင်တွေ ပို့ပေးရင်း အခြား မသိသေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေ ဗဟုသုတ နဲ့ လိုအပ်ရင် မှီငြမ်းနိုင်အောင် ဘလော့ပေါ် တင်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း နည်းပညာ ဆိုတာမျိုးက မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ဆိုတော့။ အခက်အခဲ ကြုံတဲ့အခါ ဗဟုသုတများတဲ့သူက တပန်းသာ စမြဲမို့အခက်အခဲတွေ အလွယ်တကူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းရင်းနဲ့ Print Screen များကို ရှုစားကြပါ။ ပုံအောက်က စာများကိုလည်း ဖတ်ကြပါ။
1. Go To SQL Server Management Studio
3.Choose Db to Backup
4. Backup Dialog
5. Choose Backup File Destination
6. Locate Database File Backup Location
7. Do not forget to give file extension
8.Select Destination and Then OK
9. Backup is Processing
10. Backup Successfully Finished